Iindaba - uPicosecond Nd: unyango lwe-YAG laser
UPicosecond Nd: unyango lwe-YAG laser
Uphawu: Lubonakala ngombala omdaka okanye umbala omdaka ngebala, arawndi, okweqanda okanye ongaqhelekanga. Umda ucacile, ububanzi bu malunga ne-2mm, umphezulu ugudile, ubodwa kwaye awudityaniswanga, kwaye ukuhanjiswa kwahlukile.
Uhlalutyo lwe-pathological: Isigulana sivuselela iiseli zombala ezingaphantsi rhoqo ngexesha lokuvezwa lilanga kwimitha ye-ultraviolet, kwaye ivelise isixa esikhulu semibala ye-melanin ukuvuselela ityrosinase. I-Dopa oxidizes ukukhupha i-melanin yi-tyrosinase; kunye nokonakalisa ukusebenza kwesiqhelo kweeseli zolusu. I-melanin ayikhutshwa kakuhle kwaye ihlala eluswini, ngaloo ndlela yenze amabala.
Unyango lwamalungu indlela
Umatshini osetyenzisiweyo: picoseconds
Unyango: iiveki ezi-4 zexesha lokuphumla, iiseshoni ezimbini zizonke
Indawo ye-zie: 4-6
Uhlobo Pulse: ukubetha eyodwa
Indawo yokuphela yeklinikhi: mhlophe
Igama: 李 **
Uphawu: Kukho amabala amdaka ajikeleze i-ankle namehlo, ukuhanjiswa ngokulinganayo, imida engacacanga, akukho zimpawu ziphantsi kunye nokuqaqamba ngokubanzi.
Ukuchongwa: i-chloasma (indawo ye-hip, indawo yesibindi, indawo yokukhulelwa)
Uhlalutyo lwezifo: Ngenxa yokusetyenziswa kwexesha elide kwezithambiso eziphantsi, isigulana sinciphise i-stratum corneum, sonakalise isithintelo solusu, sinciphise ukhuseleko lwe-sebum ngamadlala asabisayo, kunciphisa amandla esikhumba okumelana nemitha ye-ultraviolet, kunye nokuphazamiseka kwe-endocrine, yiyo loo nto kusenziwa amabala .
Iimpawu zibonisa ukuba chloasma
Umatshini osetyenzisiweyo: iPicosecond Laser
Ikhosi yonyango: ixesha lokuphumla: iiveki ezintlanu, iiseshoni ezi-6 zizonke
ubungakanani bendawo: 7-9
Amandla ombane: 80-240mj
Imowudi yokuphuma: Ukubetha kabini
Indawo yokuphela yeklinikhi: ulusu lube bomvu kancinci
3: Ukususwa kweTattoo
Igama: 宋 **
umsebenzi: umsebenzi wasimahla
Umhla wonyango: 2018.5.11.
Iimpawu: umvambo esandleni
6.3cm ubude obuyi-4.1cm ububanzi
Ukuchongwa: i-tattoo ngesandla
Indlela yokususa iTattoo
Unyango: Ixesha lokuphumla iiveki ezisi-8, unyango olu-4 lulonke
ubungakanani bendawo: 4-5
Imowudi yokuphuma: Ukubetha okukodwa
Ixesha lokuqala lokunyanga lisebenzisa amaza asezantsi）
Ubuhle be-CO2 Laser, Shr IPL Khetha, Ukususwa kwamabala amabala, Umatshini wokukhuthaza izihlunu ze-Ems, Umatshini weLaser we-Co2, Shr Opt Ipl Ukususwa kweenwele,